Rocky Linux kutongwa kusunungurwa kwakadzoserwa kupera kwaApril | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Rocky Project Vagadziri Linux (kusanganisira Gregory Kurtzer, muvambi weCentOS) ane chinangwa chekugadzira nyowani yemahara yeRHEL kuvaka iyo inogona kutora nzvimbo yeClassic yechinyakare, yakaburitsa mushumo munaKurume umo vakazivisa kumisikidzwa kwekuparadzirwa kwekutanga kwekuyedzwa. Kusvika Kubvumbi. 30, yakatarwa kare munaKurume 31.
Nguva yekutanga yekuyedza Anaconda installer, iyo yaifanirwa kuburitswa muna Kukadzi 28, haisati yatarwa.
Nebasa ratove kuitwa, gadziriro yemusangano wekusimbisa yakasimbiswa, iyo yekumisikidza system uye chikuva cheiyo otomatiki kuungana kwemapakeji, kuwedzera kune yeruzhinji repository yekuyedza mapakeji akaiswa mukushanda.
Iyo yekuchengetera ye BaseOS yakavakwa zvinobudirira uye basa rinoenderera paAppStream uye PowerTools zvinyorwa uye basa ririkuenderera mberi kugadzira iyo Rocky Enterprise Software Foundation (RESF) yekutarisira chirongwa ichi.
Uyewo Izvo zvinotaurwa kuti iko kugadzirirwa kwezvivakwa zvemamirioni ekutanga zvatanga, Pamusoro pezvo, chiteshi chayo cheYouTube chakatangwa uye chibvumirano chakaitwa pamwe nevakagadziri, icho chinofanirwa kusainwa nevose vanobatanidzwa mukugadzirwa kweiyo yekugovera kit.
Ngatiyeukei kuti chirongwa Rocky Linux iri kuvandudzwa pasi pehutungamiriri hwaGregory Kurtzer, muvambi weCentOS, nechinangwa chekugadzira imwe nzira inogona kutora nzvimbo yeClassic yekare.
Mukufananidza, Ctrl IQ yekutengesa kambani yakagadzirwa kugadzira zvigadzirwa zvemberi zvinoenderana neRocky Linux uye kutsigira nharaunda yevanogadzira iyi kugovera, iyo yakagamuchira kudyara kwemamiriyoni mana emadhora.
Izvo zvinovimbiswa kuti kugoverwa kwe Rocky Linux pachayo ichavandudzwa zvakazvimiririra nekambani yeCtrl IQ pasi pesimba renharaunda. MontaVista zvakare yakabatana mukusimudzira uye nemari yeprojekti. Provider FossHost yakapa michina yekushandisa imwe nzira yekuvaka zvivakwa.
Parizvino, kune avo vari kutsvaga imwe nzira kuCentOS, ivo vanogona kusarudza imwe yeimwe nzira nyowani dzinomira kuCentOS, iri AlmaLinux uye iyo yatove neyakagadzikana vhezheni yakaburitswa mushure 4 mwedzi yekushanda nesimba.
Iyo vhezheni yakavakirwa paRed Hat Enterprise Linux 8.3 uye yakafanana zvachose mukushanda kunze kwekuchinja kwakanangana nekumiswazve uye kubviswa kweRHEL-yakatarwa mapakeji senge redhat- *, ruzivo-mutengi, uye kunyorera-maneja-kutama *. Zvese zviitiko zvinotsikiswa pasi pemarezinesi emahara.
Nezve kugadzirisa yeAlmaLinux, iro bazi rekuparadzira rakavakirwa panheyo yeRHEL 8 package uye Izvo zvakavimbiswa kuvhura kusvika 2029. Kugoverwa kwacho ndekwemahara kune ese mapoka evashandisi uye kunovandudzwa nekutora nharaunda uye nekushandisa manejimendi modhi yakafanana nesangano reprojekti yeFedora.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve AlmaLinux, unogona kutarisa kubhuku nezvazvo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Rocky Linux kutongwa kusunungurwa kwakadzoserwa kupera kwaApril